कुलमानलाई हटाउने ओलीको षड्यन्त्रको सबैमिलि पर्दाफास गरौं -ज्वाला संग्रौंला – Life Nepali
कुलमानलाई हटाउने ओलीको षड्यन्त्रको सबैमिलि पर्दाफास गरौं -ज्वाला संग्रौंला
काठमाडौँ -एक नि’डर तथा सदैव सत्य अनि न्यायको पक्षमा दमदार कलम चलाउने साथै से’वामा तल्लिन सच्चा हृदयकी धनी सामाजिक अभियन्ता ज्वाला संग्रौंलाले उज्यालो नेपालका नायक उपनाम पाएका नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन खोजेपछि सामाजिक सन्जाल सरकारको चर्को बिरोध भइरहको छ। तेस्तैमा सामाजिक अभियन्ता ज्वाला संग्रौंलाले कुलमान पक्षमा अभिएकि छिन :
कुलमानलाई हटाउने ओलीको षड्यन्त्रको पर्दाफास गरौं – ज्वाला संग्रौंला’
देशलाई उज्यालो दिएर जनताको मनमा बस्न सफल कुलमान घिसिङलाई नेकपा सरकारले जसरी पनि सिध्याउन लागि परेको छ। आजभन्दा ठीक एक बर्ष अगाडि एकजना अमनलाल मोदी नाम गरेका ब्यक्तिलाई हतियार बनाएर कुलमानले बिधुत प्राधिकरणमा ९ अर्ब भ्रस्टचार गरेको भनि प्रहार गर्न लगाए। त्यसपछि कुलमानले मिडिया सँग भ्रस्टचार गरेको एक प्रमाण अमनलालले दियो भने म झुण्डिएर मर्छु भनेर सीधै प्रतिक्रिया दिएपछि जनताले उनलाई झन्मन पराए !! भने यता नेकपा भित्र अब खान नपाईने भो ,
भ्रस्टचार गर्न नपाईने भो भनेर ठुलै कोलाहल मच्चियो। त्यसपछि केपी ओलीले कुलमानलाई मिडियाबाजी गरेर जनताको नजरमा हिरो बन्न खोजेको आरोप पटक पटक लगाए। जबकी कुलमान आफै मिडियाबाट कोसौं टाढा रहने मान्छे हुन् भने फ़ेसबुक पनि एकदमै पातलो चलाउँछन्। उनी काम बढि र कुरा कम गर्ने इमानदार मानिस हुन् यो कुरा सब जनतालाई थाहा छ र यी भ्रस्टेहरुलाइ पनि थाहा छ । तर यी भ्रस्टे भरौटे हरुलाई देश अन्धकारमा डुबोस् कि कोहि भोकै मरोस् यो सब मतलब छैन !
ख़ाली सत्ता र भत्ताको मात्र लोभ छ ! कसरी हुन्छ राम्रोलाई सिध्याएर भ्रस्ट भर्ती गर्नु छ र मिलेर मुलुक लुट्नु छ ! हिजोको बैठक निस्कर्षबिहीन बनाएका ओलीले अब के गर्छन् म भन्छु नि – अब ओलीले कुलमानलाई यतिकै झुलाउँछन् र जनतालाई कानुनी प्रोसेसका उखान टुक्का सुनाएर केहि दिन भुलाउँछन्। त्यसपछि कुलमानको रिक्त पदमा तल्लो दर्जाको जता फर्कायो उतै फर्कने मुर्ती जस्तो लठैतलाई निमित्त कार्यकारी बनाउँछन्। त्यसपछि जब यो बिरोध र आवेगको माहौल सान्त हुँदै जान्छ,
उनले आफ्नो आसेपासेलाई टपक्क टिपेर कुलमानको ठाउँमा भर्ती गर्छन् ! यसरी ओली एण्ड कम्पनी सरकारले दिनदहाडै एउटा रास्ट्रको ज्योति निभाउँछ र कुलमानको कथालाई यतिकै बिट मार्छ , उनको योगदान , इमानदारिता र स्वच्छ छबिलाई किनारा लगाउँछ र आफू जनताको आँखाको उज्यालोमाथी माफियाहरुसँग मिलेर नाङ्गै नाच्छ अनि नागरिकले तिरेको करमाथी सरेआम ब ला त्कार गर्छ ! मैले देखेको सत्य यहि नै हो ! तर यसो हुनु अगावै हामीले केहि रास्ट्रघातीहरुको घरमा बम फुटाल्नु पर्छ अनि बल्ल काबुमा आउँछन् र कुलमानलाई फेरि मन नलागी नलागी दोहोर्याउँछन्।
म ह त्या हिंसामा बिस्वास गर्दिन , तर यदि कुनै गद्दार देश बिकासको बाधक बन्छ भने त्यस्लाई इन्काउन्टर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। बिप्लब दाई तिमी कहाँ छौ? अब जनताको सम्पर्कमा आऊ! गरिब हरुलाई नछोऊ तर सामन्ती , हेपाहा र अवसरबादी खलपात्रहरुको कन्चट ताकि ताकि ट्रिगर दबाऊ..! Enough is Enough ! सुन सरकार जनचेतनाको लागि यो पोस्ट ब्यापक सेयर गरौँ साथीहरु .. !
Previous सुरुमा आ’फ्नै सरले ग’रे….पछि अरु मान्छेलाई पनि ल्याउन थाले !
Next अमेरिकाबाट ठूलो संख्यामा नेपाली नि’कालिँदै,